‘सफ्ट-सेल’ नेपालीका ‘हार्ड-सेल’ कुरा :: Press Chautari ::
समाजशास्त्र/मानवशास्त्रले भन्छ, हामी नेपाली सफ्ट-सेल प्राणी हौं । सफ्ट-सेल भन्नाले दिमाखले हैन, मनले चल्ने प्राणी भन्ने अर्थ लाग्छ । अझ यसो भनौं, हामी तथ्यमा हैन, तर्कमा बाँच्छौं, यथार्थमा हैन, भावनामा जिउँछौं । हामी कुनै पनि विषय ह्र्स्नलको आधारमा हेर्दैनौ । या त अन्ध-समर्थन गर्छौ या अन्ध-विरोध । एकपटक हैन, पटक पटक हामीले यसरी नै आफूलाई सफ्ट-सेल प्राणीका रुपमा प्रमाणित गर्दै आएका छौं ।
प्रसंग, संविधान जारी हुनुपूर्व र त्यसयता भारतको क्रियामा हाम्रो प्रतिक्रियाको हो । इतिहासले भन्छ कि, भारत हामीप्रति अलि बढी पेलाह छ, मिचाह छ । तर, जति छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी ठान्छौं, बनाउँछौं हामी । उसले जे भन्छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी बुझ्छौं हामी । उसले हैन भनेको पनि हो कि हो भनेर हो भन्न लगाउँछौं हामी । हाम्रा नेतालाई लैनचौर छिराउँछौ, नयाँदिल्ली पठाउँछौं, त्यसमा हामी केही कमजोरी देख्दैनौ । तर, जब भारतले केही भन्यो कि हामी धारे हात लगाएर गाली सुरु गरिहाल्छौं । किनकि, अहिलेसम्म नपालको राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध गर्नु र प्रजातन्त्रवादी हुनु भनेको वामपन्थीको विरोध गर्नुमा नै सिमीत छ । राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हुन यीभन्दा अरु पनि चरित्र आवश्यक हुन्छन् भन्ने कुरा कहिल्यै ठानेनौ हामीले ।
अहिले हामी भारतलाई चाहिने भन्दा बढी गाली गरेर राष्ट्रवादीको डिग्री लिइरहेका छौं । तर, यथार्थमा भारतसँग पौठेजोरी खेलेर हैन, टिकल डाउन थ्यौरीमा आधारित कूटनीति चाल चालेर उसलाई माथ दिन सक्नुपर्छ । इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ नै यही हो । यसको अर्थ भारतको अघि लम्पसार गरेर तम् शरणम गर्नुपर्छ भन्ने पनि हैन । न यसो भन्नु भनेको भारतपरस्त सोच हो भनेर तथानाम साइबर बुलिंगको आमन्त्रण नै हो ।
भारतबाट प्रकाशित इण्डियन एक्सप्रेसले सातबुँदे सुझाव भनेर एक टिपोट सार्वजनिक गर्यो । त्यसलाई नेपालीहरुले भाइरल बनाए । भारतले त्यो हुँदै हैन भनेर कुरा राख्यो, फेरि भारतले कुरा फेर्यो भनेर भाइरल बनाए । नागरिक पत्रकारिताको यो युगमा एकपछि अर्को सोसल साइटमा नागरिक स्टाटस सार्वजनिक हुनु र त्यसैको आधारमा भाइरल सिर्जना गर्नु नै यल्लो जर्नालिज्म हो । अहिले हामी जानेर या नजानेर हस्ट-पुलित्जर भाले जुधाइको नयाँ संस्करणमा रमाइरहेका छौं ।
हुँदाहुँदा अब त अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकार र युवाहरुले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई न्युयोर्कमा विरोधको कालो झण्डा पो देखाउने रे । मेरो विचारमा यस्तो हैन होला, यदि हो नै भने पनि त्यो दुर्भाग्य हो । अरुको बारेमा त मलाई केही भन्नु छैन, तर पत्रकारको संस्थाले त्यसो गर्नु त टाढाका कुरा, त्यसो गर्ने कुरा सोच्छ भने पनि त्यो गलत हो । व्यावसायिक पत्रकारहरुको संस्थाले त यदि कसैले त्यसो गर्यो भने आफ्ना सदस्यहरुले के कस्तो समाचार सम्प्रेषण गरे भनेर हेर्ने हो, आफैं समाचार बनाउने स्युडो-इभेन्ट सिर्जना गर्ने हैन । यसो त केही समय पहिले अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुको संस्थाले कलाकार ल्याएर नेजा नाइट नै गर्यो र त्यो हुने क्रम पनि जारी नै छ क्या र । आयोजना र यसमा संलग्न कलाकारका बारेमा मलाई केही भन्नु छैन, तर एउटा पत्रकारिताको विद्यार्थी भएको नाताले यो सर्वथा गलत कुरा हो, यसो भन्नलाई भने मलाई कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । सिद्धान्तको कुरा हो, जसका बारेमा समाचार लेखिने र लेख्नुपर्ने हो, उनीहरुलाई प्रायोजन गर्न लगाएर, टिकट भिडाएर एडिटोरियल मिक्स गरे पछि कुन वस्तुगत आधारमा फेरि उनीहरुकै बारेमा समाचार लेख्ने हो पत्रकारले ? कलाकारलाई ल्याएर कार्यक्रम गरेपछि उनीहरुका बारेमा कुन प्रोक्सिमिटीको फित्ता फुकाएर समाचार लेख्ने हो पत्रकारले ?
वास्तवमा हामी या त सिद्धान्त नै जान्दैनौ या जाने पनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदैनौ । कसैले त्यसबारेमा कुरा उप्कायो कि धारेहात लगाएर ‘साइबर-बुलिंग’ या ‘सटर-जर्नालिज्म’ सुरु गरिहाल्छौं । यसैले मलाई आफूले जानेकोे कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा बाँड्न डर लाग्छ । तथ्य र तर्कका आधारमा आएका क्रिया÷प्रतिक्रिया त सञ्चार प्रक्रियाको सातौं अंग नै हुन्, स्वीकार्नुपर्छ । म पनि विनम्रतापूर्वक नै स्वीकार्छु । तर, त्यसो नहुँदा ‘फिडब्याक’ नै काउसो जस्तो लाग्छ मलाई ।
राज्यको चौथों अंग भनेको मूलतः वाच-डग नै हो । आफैं भित्र छिरेर क्रिया/प्रतिक्रियामा सहभागी भए पछि के वाच गर्ने र हुने हो वाचडग ? यसो भनिरहदा मलाई डा. भगवान कोइरालाको एउटा भनाइ याद आउँछ । उनले भनेका थिए, हामीलाई जे गर्नुपर्ने त्यो चाँहि आउँदैन, बाँकि सबै आउँछ । जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाँहि गर्दैनौ, बाँकी सबै गर्छौ ।
म आफैं पनि कन्फेस गर्छु कि त्यो रोगको सबैभन्दा ठूलो शिकार म आफैं पनि हुँ । म आफूलाई पत्रकारिता र सञ्चारकर्म आउँछ भन्छु तर शायद त्यही चाँहि मलाई आएको छैन कि जस्तो लाग्न थालेको छ यतिबेला । नेपाल बाहिरको डायस्पोरा त अलि फरक होला कि भन्ने ठानेको थिए । लाग्दैछ, त्यो पनि मेरो अर्को भ्रम हो । जब भ्रमका पर्दाहरु हट्दै जान्छन्, अनि जीवन छ्यांगो पो भएको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो अब त । आफूले नजानेको कुरा म के भुनँ, सफ्ट-सेल नेपालीका हार्ड-सेल कुरा, आगे उनीहरु नै जानुन् ?
विहिवार, २०७२ आश्विन ०६ गते ०३:१२ / Thursday, Sep 24, 2015 3:12 am